“Ndinoita Zvandinokwanisa”—Kuparidza Vachishandisa Tsamba
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bashkir Basque Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lari Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mingrelian Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tarascan Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa “Ndinoita Zvandinokwanisa”
Mbuya vanonzi Irma, vanogara kuGermany, uye vava kuda kutosvitsa makore 90. Vakaita tsaona yakaipisisa kaviri, uye vakaitwa maoparesheni akati wandei, saka havachakwanisi kuparidza paimba neimba sezvavaisimboita. Iye zvino vava kuudza vamwe zvavanotenda vachiita zvekunyora tsamba kuhama neshamwari. Tsamba dzavanonyora dzekukurudzira nekunyaradza dzinofarirwa nevakawanda zvekuti vamwe vanotombovafonera vachida kunzwa kuti dzimwe dzichauya riini. Vakawanda vanovatumira tsamba dzekuvatenda uye vachikumbira kuti varambe vachivanyorera. Mbuya Irma vanoti, “Kuita izvi kunoita kuti ndifare uye zvinoita kuti ndiwane mukana wekuparidza.”
Vanotumirawo tsamba kunzvimbo dzinochengetwa vakwegura. Vanoti: “Vamwe mbuya vakafona vakati tsamba yandakavanyorera yakavanyaradza pavakafirwa nemurume wavo. Vanogara vaine tsamba yacho muBhaibheri ravo uye vanogara vachiiverenga manheru ega ega. Mumwe mudzimai akashayikirwa nemurume, akati tsamba yaakagamuchira yakatomubatsira kupfuura mharidzo yakapiwa nemufundisi. Aiva nemibvunzo yakawanda uye akakumbira kuuya kwandaigara kuti ndizomupindura.”
Imwe shamwari yambuya Irma yakatamira kune imwe nzvimbo iri nechekure uye yakakumbira kuti varambe vachimunyorera tsamba. Mbuya Irma vanoti, “Mudzimai uyu aichengeta tsamba dzangu dzese uye paakafa, mwanasikana wake akandifonera. Akandiudza kuti akanga averenga tsamba dzese dzandakanga ndanyorera amai vake uye akakumbira kuti ndimunyorerewo.”
Mbuya Irma vanonakidzwa neushumiri hwavo. Vanoti, “Ndinokumbira Jehovha kuti andipe simba rekuramba ndichimushumira. Kunyange zvazvo ndisingachakwanisi kuparidza paimba neimba, ndinoita zvandinokwanisa.”
Zvapupu zvaJehovha zvinoshanya munzvimbo dzinochengeterwa vakwegura dziri kuAustralia.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Ndinoita Zvandinokwanisa”
ijwex nyaya 1
Tsamba Yakabva Kuna Alejandra